Hague iyo Fowzia Yusuf oo London ku Kulmay VOADooro Luqad kale
Sabti, Bisha Afraad 30, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 10:09
Hague iyo Fowzia Yusuf oo London ku Kulmay Daabaco
Hage & FowziaxHage & Fowzia
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Britain, Hague iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somalia, Fowzia Yuusuf X. Aadam ayaa ka wada hadlay furidda safaaradaha iyo kulan London ka dhici doona. Kulankan oo taageerada Somalia ku saabsan ayaa la sheegay in lagu wadaa inuu magaaladaas ka dhaco bisha May ee sanadkan.
Wareysi arrintaas ku saabsan hoosta ka dhagesyo. Kulanka Hague iyo Fowzia X. Aadam
Dhinaca kale, Dowladda Britian ayaa sheegtay inay xoojin doonto cilaaqaadka iyo dadaalka ay ugu jirto sidii ay Somalia uga bixi laheyd dhibaatada mudada dheer heysatay, oo arintaana ay sheeegtay inay tahay masuuliyad gaar ah oo saaran Britain oo xiriir taariikhi ah uu kala dhaxeeyo Somalia.
Hadalkan ayaa waxaa shalay Magaalada London ka sheegay Wasiirka Arimaha dibadda Britain William Hugue, ka dib markii uu kulan la qaatay, Ra’isul Wasaare ku xigeenka Somalia ahna wasiirka Arimaha Dibadda, Fowziyo Yuusuf Xaaji Aden.
warbixin ku saabsan hadaladii labada masuul ay jeediyeen xagga hoose ka dhageyso.
Dhageyso Warbixin Kulanka Wasiirada Arimaha dibadda Somali iyo Britain